jeudi, 10 septembre 2020 21:59
Soavinandriana Itasy: Sarona ny tambazotra famotsiana taratasin'omby
Tra-tehaka ny lehilahy iray, atidohan’ny famotsiana omby sy fanaovana taratasy hosoka. Loharanom-baovao azo avy amin'ny olona tsara sitrapo no nijokoana azy tao Soavinandriana Itasy ny 07 septambra lasa teo, rehefa nanaovan’ny zandary velapandrika. Mampiasa taratasin'omby ara-panjakana hosoka miisa telo izy ary ampiasainy izany isaky ny tsenan'omby ao an-toerana.Rahefa natao ny fisavana ny tranony tany Morarivo Mananasy, sy ny fivantanany tao Soavinandriana, dia nahitana fitaovana fanaovana ny hosoka ary atontan-taratasy samihafa.
jeudi, 10 septembre 2020 21:55
Soanindrariny-Antsirabe II: Ady lova, nahafatesana tovovavy 16 taona
Nitrangana disadisam-piaraha-monina tao amin’ny Fokontany Fiherenantsoa, Kaominina Soanidrariny, Distrikan’Antsirabe faharoa ny alarobia 09 septambra 2020. Ady lova no nipoiran’ny resaka, ary niafara tamin’ny fahafatesan’ankizivavy iray tokony ho 16 taona teo ho eo.Olana teo amin’ny tovolahy iray sy ny renikeliny no niantombohan’ny resaka. Mifanolana matetika ireto olona ireto amina resaka lova. Ny Alarobia tolakandro dia tonga tao amin’ny tranon’ny rainy ilay tovolahy hitady ilay renikeliny saingy tsy tao io fa ramatoa efa antitra iray no tao, ary io no norahonan’ilay tovolahy hovonoina ka niantso vonjy. Tamin’izay no tonga ilay renikeliny ary dia raikitra ny fifamaliana.
Tovolahy iray no maty voatsatoky ny antsy teto Antsirabe ny alarobia 09 septambra 2020. Mpivarotra finday avo lenta ny toeram-piasany ary mianadahy izy no miasa ao. Tokony ho tamin’ny 12 ora tany ho any, raha ny tatitra azo, dia nisy fiara nijanona tsy lavitry ny toeram-pivarotan’izy ireo, eo ampitan’ny banky BNI, ary niditra toy ny hividy finday ny ampahany tamin’ireo lehilahy tao anaty fiara. Tampoka dia namoaka basy sy antsy ireo jiolahy ary nampandohalika azy mianadahy mpiasa tao, ary nangorona ny finday sy ny vola tao am-pivarotana.
Feno herintaona amin’ity volana septambra ity no nandehanan'ny Delegasiona, nalefan'ny Ministeran'ny Fitaterana tany Bilbao, Espaina nijery ireo lohamasinina ho an’ny zotra FCE (Fianarantsoa-Côte Est) izay fampanantenan’ny filoha Andry Rajoelina nandritra fampielezan-kevitra ny fifidianana filoham-pirenena taona 2018. Efatra ireo lohamasinina tonga, ka ny 13 martsa 2020 no nampidinina avy eny ambony sambo tao amin’ny Port Toamasina. Nafindra tao amin’ny Gara Manangareza taorian’izay. Ny alarobia 13 may 2020, ireo lohamasinina ireo no niala tao amin’ny Gara Manangareza nakarina teto Antananarivo ary mitoby etsy amin’ny Gara Soarano.
Zandary miisa efatra no namoy ny ainy nandritra ity taona 2020 ity, raha enina no naratra teo ampanantanterahana ny asany vokatry ny fifandonana tamin’ny dahalo. Ny harivan’ny 07 septambra 2020 teo dia zandary iray miasa ao amin’ny BRS Analakininina Malaimbandy Menabe no notafihan’ny dahalo mitam-piadiana tao amin’ny tanàna atao hoe Manandaza Malaimbandy. Voan’ny bala teo amin’ny tratra ilay zandary. Nalaina tamin’ny angidimby ny talata 08 septambra maraina ka nentina nankatý Antananarivo, ary tsaboina ao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana.
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Marofoto Mahajanga ny Ben’ny tanàna Antongomena Bevary any amin’ny Distrikan’i Mitsinjo. Fisolokiana miaro seky tsy misy anto-bola no nanenjehana azy. Naka lavanila taman’olona izy. Namidiny ilay lavanila ary nahazoany vola be nanaovany propagandy tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna ny 27 novambra 2019. Kandida tsy miankina izy, ary voafidy soa amantsara. Seky tsy nisy anti-bola no nomeny ilay tompon'ny lavanila. Nahatsiaro ho voasoloky ity farany ka nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana.
Teratany Malagasy miisa 250 no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly. Avy any Eorôpa izy ireo, ary andiany faha-3 tafody an-tanindrazana hatramin’ny 15 aogositra 2020. Tafakatra 1273 amin’izy ireo no efa tafody an-tanindrazana. Sidina faha-9 io tonga omaly io hatramin’ny nandraisan’ny fanjakana fanapahan-kevitra nampodiana ireo teratany malagasy tavela tany ivelany, hatramin’ny nikatonan’ny sisintany noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Natao fitiliana PCR avokoa ireo mpandeha teo ampahatongavana teny Ivato, na efa nanao izany aza izy ireo nialoha ny niondranana nankaty Madagasikara. Nahiboka avy hatrany izy ireo taorian’ny fakana singa. Toerana telo no nandefasana azy ireo, dia eny amin’ny « Villa Verte » sy Domaine St François, toerana samy eny Ambatomirahavavy, ary misy koa ao amin’ny hotely Ibis etsy Ankorondrano. Any izy ireo no miandry ny valin’ny fitiliana natao azy ireo. Afaka mamonjy fianakaviany ireo tsy ahitana soritr’aretina na « négatif ». Alefa tsaboina ao amin’ny CTC Mahamasina kosa ireo ahitana soritr’aretina Covid-19.
Notafihin'ny andian-dahalo mitam-basy ny vohitra Beombalahy, Fokontany Morafeno, Kaominina Anjomaramartina, Faritra Vakinankaratra androany vao mangirandratsy. 40 lahy eo ireo dahalo, miampy ankizy sy vehivavy no nanafika. Nodoran'izy ireo ny tanàna. Trano manodidina ny 50 no may. Tsy nisy azo noraisina ny entana hatramin'ny masomboly. Olona efatra no maty, roa vavy sy roa lahy. Katekista ny iray amin'ireto farany. Olona miisa fito maratra mafy, misy voan'ny bala eo amin'ny lohany, tratrany, tongony. Niezaka namaly ny Fokonolona fa tsy naharesy tosika noho ny hery tsy mitovy. Nanararaotra ireo dahalo satria saika lasa tany an-dasy, nilasy volamena avokoa ny ankamaroan'ireo lehilahy tao an-tanàna.
dimanche, 06 septembre 2020 12:32
Mpitandro filaminana: « Gâchette facile », basy apoapoaka tsy amin’antony
Polisy, mpianadraharaha iray, miasa ao amin’ny Commissariat de Police Isotry no nitifitra ka nahafaty tovolahy sivily iray, izay namany niara-nikorana tamin’ny ihany. Voa teo amin’ny lohany ity farany. Teny Isoraka-Antananarivo no niseho ny loza ny harivan'ny sabotsy 05 septambra 2020.Nitolo-batana tany amin’ny lehibeny ilay Polisy taorian’izay. Notanana atao fanadihadiana ao amin’ny BC Anosy ilay nahavanon-doza. Nanokatra fanadihadiana ihany koa ny IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale) noho ny fahadisoana arak'asa nataon’ilay Polisy araka ny toromariky ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ity farany izay manaiky mihitsy ny fisian'ny fifampiarovana sy ny tsikombakomba eo amin'ny Polisim-pirenena raha misy Polisy mahavita heloka, izay mila iadiana izany hoy izy. Nalefa ao amin’ny tranompaty HJRA Anosy ny faty.
vendredi, 04 septembre 2020 21:02
Belinta-Mahajanga: Nangahiahy ireo mpianatra hanala CEPE fa nisy nandoro ny sekoliny
Nirehitra omaly Alakamisy 03 septambra ny atoandro ny Collège Privé Salema ao Belinta Mahajanga. « Raha ny fahitana azy dia niniana satria tsy misy afo ahiana ho tonga eo, fa manamorona arabe maina be ilay trano nirehitra », hoy ny mpitantana ny sekoly. « Efa fanimpitony » niharan’ny fahamaizana ity sekoly ity, hoy ny fanazavana. Vita amin’ny satrana avokoa ny tafontranon'ny sekoly noho ny antony ara-bola vokatry ny fahamaizana nisesy sy ny toetr'andro mafana aty Mahajanga, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy dia mafana mantsy ny ao ambany tafo satrana.